Khin Ma Ma Myo's Blog: 2011
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နေသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအကြားမှာ ထင်ရှား ကျော်ကြားလှပါတယ်။ (၁၉၉၀) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ မှာ တောင်အာဖရိက သမ္မတ F. W. de Klerk က နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် မင်ဒဲလားကို လွှတ်ပေး လိုက်တဲ့အခါမှာ တောင်အာဖရိကပြည်သူများသာမက ကမ္ဘာကပါ အံ့သြသွားခဲ့ကြပါတယ်။ မင်ဒဲလားကို လွှတ်ပေးလိုက်မှုဟာ အပြောင်းအလဲတွေကို ဦးတည်လာပြီလားဆိုတာကို အဆိုးဘက် ကကော၊ အကောင်းဘက်ကပါ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်ဒဲလားတယောက်ထဲကို လွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တင် နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု (political reform) ကို အာမခံချက် မရှိနိုင်ကြောင်းကိုလဲ အများက နားလည်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် F. W. de Klerk အစိုးရဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေ၊ မင်ဒဲလားဦးဆောင်တဲ့ ANC (African National Congress) အပါအ၀င် တောင်အာဖရိက အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း များစွာက တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပညာရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ extraordinary negotiation process လို့ မှတ်တမ်းတင်ခံထားခဲ့ရတဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကြီးကို ပူးတွဲ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
(၁၆၅၂) ခုနှစ်မှာ ဒတ်ခ်ျအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီက Cape of Good Hope မှာ ဌာနခွဲတခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အာဖရိကတိုက် တောင်ပိုင်းဒေသမှာ လူဖြူတွေက ကိုလိုနီစနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတွေ ပြုလုပ်လာပါတယ်။ သူတို့တွေကို Boers တွေလို့ သတ်မှတ်ခေါ်တွင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက ဒေသခံလူမည်းလူမျိုးတွေကို ကျေးကျွန်ပြု အလုပ်စေခိုင်းမှုတွေ လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ (၁၇၉၅) ခုနှစ်မှာ Cape of Good Hope ကို ဗြိတိသျှတွေက သိမ်းပိုက်ပြီး၊ (၁၈၁၅) ခုနှစ်မှာတော့ ဒေသတွင်း ထိန်းချုပ်မှုတွေ ပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှတွေက လူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်မယ့် မူဝါဒတွေ ပြောင်းလဲချမှတ်လာပြီး၊ (၁၈၃၄) ခုနှစ်မှာ ကျေးကျွန်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Boers တွေဟာ နယ်မြေသစ်ရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုနယ်မြေသစ်တွေ ရှာဖွေရင်း (၁၈၆၉) ခုနှစ်မှာ Kimberly ဆိုတဲ့နေရာမှာ သဘာဝသယံဇာတ စိန်တွေ တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ မကြာမီမှာပဲ Johannesburg မှာ ရွှေတွေ ထပ်မံ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဗြိတိသျှတွေက နယ်မြေသစ်တွေကိုပါ လက်အောက်ခံဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်လာတာကြောင့် သယံဇာတပေါကြွယ်ဝတဲ့ နယ်မြေတွေကို လုကြရင်း Boer Wars နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် စစ်အင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အား သာလွန်တဲ့ ဗြိတိသျှတို့ဘက်က အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၁၀) ခုနှစ်မှာတော့ ဗြိတိသျှတို့က တောင်အာဖရိက ပြည်ထောင်စုအဖြစ် ကွဲပြားနေတဲ့ နယ်မြေ ဒေသ အသီးသီးကို စုစည်းသတ်မှတ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ Mines and Work Act (1911), Natives Land Act (1913) တို့ကို ပြဌာန်းခဲ့ရာမှာ လူမည်းလူမျိုးတွေအတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာစေမယ့် ပုဒ်မတွေ အများအပြား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၃၀) ကာလတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်က တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကို ဆိုးရွားစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူဖြူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမျိုးသားပါတီက လူဖြူဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ဦးစားပေးပြီး၊ လူမည်းတွေကို ဈေးပေါသော လုပ်သားများအဖြစ် ခွဲခြား အသုံးချမယ့် မူဝါဒတွေကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီပါတီဟာ (၁၉၄၈) ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပါတီ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အနိုင်ရပါတီဟာ ရေးဆွဲထားတဲ့ မူဝါဒတွေကို အခြေခံပြီး Apartheid Laws တွေကို ချမှတ်ကျင့်သုံးပါတော့တယ်။ တောင်အာဖရိက ဘာသာစကားအရ Apartheid ဆိုတာ ခွဲခြားခြင်း (separation) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေတွေဟာ လူမည်းတွေရဲ့ ဘ၀အခွင့်အလမ်းများကို မတရားဖိနှိပ်မှုများနဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက် ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
၁၉၅၀ ကနဦးကာလတွေမှာ အကြမ်းမဖက် ဥပဒေဘောင်တွင်း လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ တန်းတူညီမျှရေးကို တောင်းဆိုပြီး၊ ထောင်ထဲဝင်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေး အန်တုမှု ကင်ပိန်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တောင်အာဖရိက အမျိုးသားကွန်ဂရက် (အေအင်စီ)နဲ့ အခြား မဟာမိတ် တွေက လူမျိုးပေါင်းစုံတန်းတူညီမျှရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စတာတွေ ပါဝင်တဲ့ Freedom Charter ကို တောင်အာဖရိကအစိုးရဆီ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရက ငြင်းဆန်ပြီး၊ မင်ဒဲလားအပါအ၀င် ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါ တယ်။
၁၉၆၀ ခုနှစ်ရောက်တော့ ဒီလို normative leverage လုပ်နေရုံနဲ့ပဲ အောင်ပွဲရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အေအင်စီ ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကြာအောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမှုတွေဟာ Apartheid အစိုးရ ရပ်တည်မှုကို ရွေ့လျားအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဖူးဆိုတာကို သိမြင်လာကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ နိုင်ငံနဲ့အ၀ှမ်း ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အေအင်စီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မဟာမိတ်တွေ စုပေါင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ (၁၉၆၀) The Sharpeville Massacreမှာ ဆန္ဒပြသူ (၆၉) ဦးကျဆုံးပြီး၊ (၁၈၀) ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တ၀ှမ်းက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ လူနှစ်ထောင်ကျော်ကိုလဲ အစိုးရက လိုက်လံဖမ်းဆီးပါ တော့တယ်။
ဒီအခါမှာ ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့က ရွေးစရာလမ်း သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။ လူထုတိုက်ပွဲတခုတည်းနဲ့ မရ၊ လက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပါ ပေါင်းစပ်ရမယ်လို့ အမြင်ရှိလာတာကြောင့် မင်ဒဲလားနဲ့ အေအင်စီဟာ ဇူးလူးဘာသာစကားနဲ့ “Spear of the Nation.” လို့ အမည်ရတဲ့ military wing ကို တည်ထောင်ပါတော့တယ်။ စစ်ရေးနဲ့ တောင်အာဖရိက စစ်တပ်ကို ယှဉ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေး စားပွဲပေါ်ကို အစိုးရဆီ တွန်းပို့ နိုင်လာမယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
(၁၉၆၂) ခုနှစ်မှာတော့ မင်ဒဲလားနဲ့ ခေါင်းဆောင်အချို့ကို တောင်အာဖရိက လုံခြုံရေးတပ်တွေက ဖမ်းဆီးမိသွားပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေ အဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးအရှိန်က နှေးကျသွား ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေ အားလျော့ပြီး၊ နိုင်ငံပြင်ပက မင်ဒဲလားလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု၊ နိုင်ငံတကာ ကင်ပိန်းတွေရဲ့ အရှိန်ကသာ ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရထဲကို ၀င်ပူးပြီး (change from within) လုပ်မှပဲ ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး သဘောတရားတွေက ပျံ့နှံ့နေရာယူလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိနှိပ်မှုရှိသမျှ ထကြွပုန်ကန်မှု၊ နိုင်ငံရေးအန်တုမှု ဆိုတာ ရှိနေမှာပဲဆိုတဲ့ တော်လှန်ရေးဥပဒေသတွေဟာ တောင်အာဖရိကမှာလဲ မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင် တွေ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်းတွေမှာ The Black Consciousness Movement (BCM) စတာတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
(၁၉၇၆) ခုနှစ်မှာတော့ The Soweto uprising ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီလူထုအရေးတော်ပုံကြီးကို လူငယ်ကျောင်း သားတွေက ဦးဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပထမ နှစ်လအတွင်းမှာ လူငယ် နှစ်ထောင်ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလူထု အရေးတော်ပုံ ကြီးကို ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ မျိုးဆက် ဟောင်းတွေက အချိန်ကိုက် တိုင်မင်ပေးပြီး လှုပ်ရှားစေခဲ့တာလဲ မဟုတ်သလို၊ ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း ခေါင်းဆောင်တွေက တိုက်ပွဲခေါ်ယူခဲ့တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
"မတရားမှုသည် ဥပဒေဖြစ်လာသောအခါ တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းသည် တာဝန်တရပ်ဖြစ်လာသည်" ဆိုတဲ့ ဥပဒေသအတိုင်း (၁၉၇၆) ခုနှစ်၊ တောင်အာဖရိက လူထုအရေးတော်ပုံကြီးက ရုတ်ခြည်း ထဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ အစိုးရက လူမည်း ကျောင်းသားတွေကို လူဖြူ Boers တွေရဲ့ ဘာသာစကားကို အတင်းအကြပ် သင်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေက ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ လုံခြုံရေးတပ်တွေကြောင့် ကျောင်းသားလေး တယောက် သေသွားပါတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် Soweto မှာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီး၊ တနိုင်ငံလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နှစ်ကျော် ကြာအောင် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီလူထုအရေးတော်ပုံကြီးမှာ လူပေါင်း တသောင်းကျော်ခန့် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလူထု အရေးတော်ပုံကြီးဟာ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာတော့ သမိုင်းတကွေ့ကို ချိုးပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ထောင်ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း ခေါင်းဆောင်တွေ ထောင်ထဲမှာ ပေါင်းစည်းမိသွားကြပါတယ်။ ထောင်ပေါင်း များစွာသော လူတွေက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီး အေအင်စီနဲ့ ပီအေစီအဖွဲ့တို့ရဲ့ military wing တွေမှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မျိုးဆက်သစ်တွေ ထပ်ပြီး ပေါ်ထွက်လာ ပါတယ်။
(၁၉၈၃) မှာ အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသစ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီး၊ လူထုရဲ့ တိုက်ပွဲရေချိန်ကို လျှော့ချဖို့နဲ့ တော်လှန်ဆန့်ကျင်သူတွေကို ဖြိုခွဲဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲကို ညီညီညာညာ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာကြောင့် အစိုးရစိတ်တိုင်းကျ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အထိနာ စေခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၈၅) ခုနှစ်မှာ The Sharpeville Massacre နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ကို လူထုလှုပ်ရှားမှု အသွင်နဲ့ ကျင်းပကြတာကြောင့် အစိုးရက နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေငြာ လိုက်ရပါတော့တယ်။
ဒီအခါမှာ လူပေါင်း နှစ်သန်းကျော်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ခုနစ်ထောင်ကျော်က နိုင်ငံရေးအန်တုမှု လှုပ်ရှားမှု ကြီးကို စတင်ကြပါတော့တယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်း ခုနစ်ထောင်ကျော်ဟာ Mass Democratic Movement (MDM) ခေါင်းစီးအောက်မှာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ တိုက်ပွဲမရှိပဲ တပ်ပေါင်းစုတွေ ဖွဲ့လိုက်၊ ကွဲလိုက်၊ ပြဲလိုက်၊ ပြန်တည်ထောင်လိုက်နဲ့ သံသရာ လည်နေတာထက်စာရင် ဒီလို တိုက်ပွဲရှိချိန်မှာ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း၊ သူ့အဖွဲ့အစည်းစတာတွေကို ခေါင်းစီးမတင်ပဲ တပ်ပေါင်းစု လှုပ်ရှားမှုသဏ္ဌာန် ခေါင်းစီးကြီးတခု အောက်မှာ ညီညွတ်ရေး ဖြစ်တည်လာတာက ပိုပြီးထိရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ တောင်အာဖရိကရဲ့ MDM လှုပ်ရှားမှုကြီးက သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို လှုပ်ရှားမှုကြီး အရှိန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှ အစိုးရဆီမှာ အာဏာရှိတာနဲ့ စစ်တပ်ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရုံက လွဲလို့ ဘာမှ မကျန်တော့ပါဘူး။ ပြည်တွင်းပြည်ပ legitimacy မရှိပါဘူး။ အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေဘက်မှာတော့ အများပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှု၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ပြုမှု၊ အောင်ပွဲကို မဆောင်ကျဉ်းနိုင်ပေမယ့် အရှိန်တခုရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ အစိုးရဘက်က နှိမ်နင်းသမျှ ဖိလေကြွလေ ဖြစ်လာတဲ့ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်သော တပ်ပေါင်းစု လှုပ်ရှားမှုကြီး၊ ငွေကြေးတွေ၊ အာဏာတွေနဲ့ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းလို့ မရနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များရဲ့ တော်လှန်စိတ် ခိုင်မာမှု စတာတွေရဲ့ အားတွေကို ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးဟာ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်နေပြီး၊ ပါဝါချိန်ခွင်လျှာ ညီလာတဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ အစိုးရဘက်က မင်ဒဲလားရဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုသော ဆန္ဒရှိမရှိကို ကနဦး အတည်ပြုပါတယ်။ (၁၉၉၀) ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့မှာ မင်ဒဲလားကို လွှတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အေအင်စီနှင့် အခြားနိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ban လုပ်ထားခြင်းကို ရုတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရဘက်က စတင်ကြေငြာပြီး၊ မင်ဒဲလားကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အချိန်အခါနှင့် နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း
(၁၉၈၀) ကာလတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့ တောင်အာဖရိက အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံ တော်လှန်ရေး သမားတွေအကြားက ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေမှာ အတိုက်အခံတွေရဲ့ အသက်တွေ အများအပြား ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ အရေးယူထားတာကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မှာလဲ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဘက်မှာကလဲ လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အား၊ စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတယ် ဆိုပေမယ့် လူထုထောက်ခံမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာ တရားဝင်မှုကို ဘယ်လိုမှ လုပ်ဆောင်လို့ မရပါဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက အင်အားသုံးဖြေရှင်းရုံနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်စပြုလာကြပါတယ်။
မင်ဒဲလားနဲ့ သူ့ရဲဘော်တွေကလဲ အစိုးရကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် ကျောက်တုံး ကျောက်ဆောင် တွေကို ခွဲနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ရောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်ဒဲလားဟာ အကျဉ်းချခံ ထားရပေမယ့် ဥပဒေ၊ ဘောဂဗေဒနဲ့ သမိုင်းပညာရပ်တွေကို ဆည်းပူးနေခဲ့ပါတယ်။ လူထုအရေးတော်ပုံ အပြီးမှာ တော်လှန်ရေးသမား အများအပြား ထောင်ထဲရောက်လာခဲ့တာကြောင့် မင်ဒဲလားနဲ့ သူ့ရဲဘော်တွေဟာ ထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေနဲ့ ဘောဂဗေဒ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုတွေ ပြုလုပ်လာကြပြီး၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စုတွေကိုလဲ လျှို့ဝှက်ဖြန့်ဖြူးမှုတွေ လုပ်လာကြတာကြောင့် အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ် နိုင်စွမ်းတွေ တိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာ လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အားပေးမှုတွေ ရရှိနေပေမယ့် အဆုံးသတ်အောင်ပွဲကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် အတိုက်အခံဘက်မှာ capability မရှိဘူး ဆိုတာကို သဘောပေါက် နားလည်လာကြပါတယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေ ပျက်ယွင်းနေမှုတွေ၊ လူထုရဲ့ လူနေမှုဘ၀ ယိုင်လဲပျက်စီးနေမှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ရှည်ကြာနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြပါတယ်။ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံထားရစဉ် တလျှောက်မှာ မင်ဒဲလားအနေနဲ့ အစိုးရအပေါ်မှာ uncompromising competitive stance ကနေ ရပ်တည်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (၁၉၉၀) ခုနှစ်မှာ အစိုးရက လွှတ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလာချိန် မှာတော့ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေအပေါ် အခြေခံတဲ့ multiracial democracy စနစ်ကို အသွင်ကူးပြောင်းရေး စတင်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ pre-condition ချမှတ်ပြီး၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ခြေလှမ်းကို စတင် လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလို မင်ဒဲလားကို လွှတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လက်ခံပြီး pre-condition တခု ချမှတ်ကာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရန် စတင်လိုက်တဲ့ မင်ဒဲလားရဲ့ ခြေလှမ်း စတာတွေကို တွေ့မြင်လာကြတဲ့ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်အချို့နဲ့ ပညာရှင်တွေကလဲ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကြီး စတင်လာနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပညာရှင်တွေက တိုးတိုးတမျိုး၊ ကျယ်ကျယ်တဖုံ တွေ့ဆုံစကားပြောမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြပြီး၊ တဘက်နဲ့တဘက်ရဲ့ အခြေအနေကို သွေးတိုးစမ်းလာကြပါတယ်။
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု ပြုခဲ့ကြတဲ့ ပဋိပက္ခထဲက အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေ တရားဝင် မစတင်ချိန်မှာ တဘက်နဲ့တဘက် သွေးတိုးစမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ညစာစားပွဲတွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေ ပြုလုပ်ပြီး အပြန်အလှန်ဖိတ်ကြားတက်ရောက်မှုတွေ လုပ်တတ်ကြ ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ရင်း တဘက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို မသိမသာ အကဲခတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြုလုပ်ထားမှသာ လက်တွေ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကို အထောက်အကူ ပြုလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဋိပက္ခရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ဒီလို သွေးတိုးစမ်းမှုတွေကို testing the waters လို့ သုံးနှုံးပါတယ်။ ရေထဲမဆင်းခင် ရေအတိမ်အနက် မည်၍မည်မျှ ရှိမယ်ဆိုတာကို စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ သဘောပါပဲ။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်မှာ ဒီလိုသွေးတိုးစမ်းကာလက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ တဘက်နဲ့တဘက် စောင့်ကြည့်လေ့လာကြတဲ့ ကာလဖြစ်ပြီး၊ တဘက်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ လိုလားချက်တွေကို တဘက်က လေ့လာရာကနေ ဘုံအကျိုးစီးပွားတွေ၊ common ground တွေကို ရှာဖွေကြတဲ့ ကာလဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီလို အခြေအနေမှာ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို အခြေအနေမှန် ရိပ်စားမိခြင်း မရှိတဲ့ မိမိတို့ ဘက်တော်သားတွေက ဝေဖန် ပြောဆိုစွပ်စွဲမှုတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ပိုပြီးဆိုးရွားစေတဲ့ အချက်က ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကလဲ သွေးတိုးစမ်းမှုကို လုပ်ကြည့်နေရဆဲ ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာကိုမှ သေချာပေါက်အာမခံပြီး ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသေးတဲ့အခါ အခြေအနေကို အားမလို၊ အားမရဖြစ်မှုတွေ ပေါ်ထွက်လာ တတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ဦးတည်တဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ် မစတင်ခင်မှာ တဘက်နဲ့တဘက် သွေးတိုးစမ်းရတဲ့ အချိန်ကာလတခု ရှိတယ်ဆိုတာကို သိရှိနားလည်ခြင်း အားနည်းချက်ကြောင့် ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပေါ်ထွက်လာမယ့် အကျိုးအမြတ် (joint gains) ကို လေ့လာရှာဖွေနေတာ ဖြစ်ကြောင်း ခေါင်းဆောင် တွေက အများပြည်သူကို အသိပေးပြီး၊ အားမလိုအားမရ ဖြစ်မှုတွေကို ဖြေသိမ့်ပေးလေ့ ရှိကြပါတယ်။
သွေးတိုးစမ်းကာလဆိုတာ အခန့်မသင့်ရင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဆီကို ပြန်လည်ဦးတည်သွားပြီး၊ ပဋိပက္ခ ရှည်ကြာစေတဲ့ အခက်ခဲဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ဘက်တဘက်အတွင်းမှာဖြစ်စေ၊ အခြား ဘက်တဘက်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်စေ အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ အမြော်အမြင်ကြီးမှုတို့အပေါ်မှာ အခြေခံဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်တွေက သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်အာဖရိက မှာတော့ ဒီလိုသွေးတိုးစမ်း ကာလရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပညာရှင်တွေဟာ တဘက်နဲ့တဘက် deal လုပ်လို့ ရနိုင်မယ့် အခြေအနေ တွေကို လေ့လာတွေ့ရှိသွားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
လူဖြူခေါင်းဆောင်တွေကလဲ မင်ဒဲလားနဲ့ အတိုက်အခံတွေကို ဆက်လက်နှိမ်နင်းနေရင် လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ အရှိန်ကောင်းလာပြီး ထိန်းချုပ်ရ ခက်ခဲမယ်၊ နိုင်ငံတကာက ဖိနှိပ်မှုတွေ ပိုများလာမယ် ဆိုတဲ့ ပကတိအခြေအနေမှန်ကို သိမြင်လာကြပါတယ်။ မင်ဒဲလားတို့ဘက်ကလဲ လူမည်းအများစုဟာ အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိမှု၊ ပညာရေးအခြေခံအားနည်းမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပြီး၊ လူဖြူခေါင်းဆောင်တွေကသာ စည်းစိမ်ဥစ္စာဓနတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံက ထွက်ခွာ သွားမယ်ဆိုရင် နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရသစ်ဟာ တိုင်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိုလဲ ဖော်ဆောင်ရန် ခဲယဉ်းနိုင် ကြောင်း ပကတိအခြေအနေမှန်ကို သိမြင်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် majority rule ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးပြီး၊ minority rights ကို ကာကွယ်သင့်ကြောင်း စဉ်းစားမိလာကြပါတယ်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှည်ကြာခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူမှု အဆောက်အအုံကို ထိခိုက်ပျက်စီးသွားစေခဲ့တယ်ဆိုတာကို နှစ်ဘက်စလုံးက လက်ခံလာကြပါတယ်။ လူမှုအဆောက်အအုံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း မပြုလုပ်ဘူးဆိုရင် နောင်မျိုးဆက်တွေ ဒုက္ခ ရောက်တော့မှာကို သိမြင်လာကြတာနဲ့ အမျှ ပညာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း စဉ်းစား လာကြပါတယ်။ ဒီလို စဉ်းစားမှုတွေ၊ သိမြင်မှုတွေ ရှိလာပေမယ့် တဘက်နဲ့တဘက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး အနိုင်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့သူတွေအကြားမှာ သံသယတွေ၊ အမြင်မရှင်းမှုတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေ၊ နာကြည်းမှုတွေက အမြစ်တွယ်နေတာကြောင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်ဟာ ခက်ခဲကြန့်ကြာမှုတွေ ရှိနိုင်သလို၊ ကန့်ကွက်မှုတွေလဲ ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာသုံးသပ်မိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး (confidence building) ကို Bold Move တွေနဲ့ တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာကြပါတော့တယ်။
ပြောင်းလဲမှုသို့ ဦးတည်သော ရွေ့လျားမှုများ
ပြောင်းလဲမှုတွေကို စတင်ဖို့ ရွေ့လျားမှုတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရွေ့လျားမှုတွေရှိမှသာ ပြောင်းလဲမှုကို ဦးတည်တဲ့ အရှိန်အဟုန်ကို မြှင့်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရွေ့လျားမှုတွေဆိုတာမှာလဲ သဏ္ဍာန်မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ ပမာဆိုရရင် အားကစားနည်းမျိုးစုံရဲ့ သဏ္ဍာန်ကွဲပြားသလိုပါပဲ။ ဘောလုံးကစားတဲ့အခါ ဘောလုံးတလုံးကို လူပေါင်းများစွာက လုယူကစားရပါတယ်။ ဘတ်စ်ကက်ဘောကစားတဲ့အခါလဲ ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဂေါက်သီးကစားတဲ့အခါမှာကျတော့ ဘောလုံးတလုံးထဲကို လုပြီးကစားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘောလုံးနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်အရွေ့နဲ့ကိုယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားကစားနည်းတွေမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ။ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့သူ ရှိပါတယ်။ လက်ဝှေ့ပွဲဆိုရင် သူနိုင်၊ ကိုယ်နိုင် အပြိုင်အဆိုင် အလဲထိုးကြရပါတယ်။ သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲဆိုပြန်ရင်တော့ ပစ်မှတ်ကို ထိအောင် ဘယ်သူက ပစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ပြိုင်ကြရပါတယ်။ စကားစစ်ထိုးပွဲဆိုရင် စကားနဲ့ အနိုင်ယူကြ ရပါတယ်။ အားလုံးဟာ ကိုယ့်အရွေ့နဲ့ကိုယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါက်သီးရိုက်ပွဲကို ဘောလုံးပွဲလို ဖြစ်စေချင်လို့ မရပါဘူး။ စကားစစ်ထိုးပွဲက လူတွေကို လက်ဝှေ့ပွဲကြိုးဝိုင်းထဲထည့်ပြီး လက်အိတ် အတင်းစွပ်၊ ထိုးကြိတ်ခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ ကစားနည်း ကစားဟန်တွေ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ။ ဥပဒေတွင်းနိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေပ နိုင်ငံရေး၊ မြေပေါ်နိုင်ငံရေး၊ မြေအောက်နိုင်ငံရေး၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ စားပွဲဝိုင်းနိုင်ငံရေး၊ သံတမန်နိုင်ငံရေး၊ လမ်းမပေါ်က နိုင်ငံရေး စတာတွေ အားလုံးမှာ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ မတူညီနိုင်ပါဘူး။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ ဒီလို ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ၊ ဥပဒေသတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက် ခဲ့ကြပါတယ်။ မြေအောက်နိုင်ငံရေး၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတွေ အရှိန်မြှင့်ဖို့ လိုအပ်နေချိန်မှာလဲ တာဝန်ကျေပြွန်အောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသလို၊ နိုင်ငံရေးအရ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ထောက်ကူပေးနိုင်မယ့် ပြင်ဆင်တည်ဆောက်မှုတွေကို လဲ ကြိုးပမ်း ဖော်ဆောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
မင်ဒဲလားကို လူဖြူအစိုးရက ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားချိန်မှာ အခြားခေါင်းဆောင်တွေက လူထု လှုပ်ရှားမှု လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လက်တွေ့ကျကျ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ မင်ဒဲလား လွတ်မြောက်လာချိန်မှာ နိုင်ငံနဲ့ အ၀ှမ်းမှာ လူနှစ်သန်းကျော်အင်အားရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ခုနစ်ထောင်ကျော် ရှိနေပါတယ်။ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်အားစု တွေလဲ ရှိသလို၊ ပြည်ပမှာလဲ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပြည်သူ့ရေးရာ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေ ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ဒါတွေကို မင်ဒဲလားက ပြုလုပ်ထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ လွတ်မြောက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်များနဲ့ လှုပ်ရှား တက်ကြွသူများက အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အမြော်အမြင်ရှိမှု၊ အသိဥာဏ်ပညာ ကြီးမားမှုနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်တတ်မှုတွေဟာ တောင်အာဖရိက စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ် အောင်မြင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Leverage ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတည်ဆောက်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေကို အခြားသူတွေက ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်း မရှိပဲ၊ မင်ဒဲလား လွတ်မြောက်လာ မှသာ အစစ၊ အရာရာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နေရမယ်ဆိုရင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကြီး အောင်မြင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။
လွတ်မြောက်လာချိန်မှာ ဒီလို ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုအင်အား၊ နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံ အားပေးမှုနဲ့ ကဏ္ဍအလိုက် ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုတွေ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့အတွက် မင်ဒဲလားဟာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို ဦးဆောင်ပြီး၊ ထိရောက်တဲ့ ရွေ့လျားမှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လ အနည်းငယ် အတွင်းမှာတင် Groote Schuur Minute ကို မင်ဒဲလား ဦးဆောင်တဲ့ အေအင်စီနဲ့ အစိုးရတို့အကြား သဘောတူညီ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Groote Schuur Minute အရ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုများ အဆုံးသတ်ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးကို နှစ်ဘက်စလုံးမှ အလေးအနက်ထား၍ ဖော်ဆောင်ရန်၊ စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် အတားအဆီးများကို နှစ်ဘက်စလုံးမှ ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားရန်၊ ယင်းသို့ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးပါက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားရန်နဲ့ အစိုးရဘက်မှ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာထားမှုများအား ရုတ်သိမ်းပေးရန် စတဲ့အချက်တွေကို သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်အဖွဲ့ (working group) တခုကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီအလုပ်အဖွဲ့ကနေ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ပြည်ပမှာ နေထိုင်နေရသူများ ပြည်တော်ပြန်ရေး ကိစ္စရပ်များနဲ့ သက်ဆိုင်သော conditions များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ အစီရင်ခံစာကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာကို ဒုတိယအကြိမ် သဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ Pretoria Minute မှာ နှစ်ဘက်စလုံးက အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွင်မကပဲ တောင်အာဖရိက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အခြားနိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် ပြည်သူလူထုအကြားမှာ "နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာ တွေဟာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်း နည်းလမ်းတခုတည်းနဲ့သာ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်" ဆိုတဲ့ အမြင်တရပ် ထွန်းကားလာအောင် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့ နှစ်ဘက်စလုံးက သဘောတူညီလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ Pretoria Minute အရ အစိုးရဘက်က ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအက်ဥပဒေကို ပြုပြင်ရေးဆွဲရေးနဲ့ မင်ဒဲလားတို့ဘက်က အေအင်စီရဲ့ လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းရေးတို့ကိုလဲ သဘောတူညီ ခဲ့ကြပါတယ်။
မင်ဒဲလားလွတ်မြောက်ပြီး တနှစ်အကြာမှာ အစိုးရဘက်က Apartheid laws တွေကို ပြင်ဆင် ရေးဆွဲဖျက်သိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပြီး၊ (၁၉၉၁) ခုနှစ် ဇွန်လမှာ the Group Areas Act နဲ့ the Population Registrations Act တွေကို အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ် အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲ ကာလမှာ နှစ်ဘက်စလုံးဟာ အပေးအယူတွေ လုပ်ခဲ့ကြသလို၊ တွန်းအားတွေလဲ အပြန်အလှန်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပမာဆိုရရင် မျဉ်းပြိုင်ပြေးလမ်းတွေ ပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြရာက ဆုံမှတ်တခုပေါ်ရောက်ရှိဖို့အတွက် နှစ်ဘက်စလုံးက တစထက်တစ နီးကပ်အောင် ရွေ့လျားသွားကြတဲ့ သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။
လူဖြူအစိုးရဲ့ ပါလီမန်ကြီးကို ဖျက်သိမ်းပေးရမယ်လို့ မင်ဒဲလားတို့က မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပါလီမန်ကနေ ပြင်ဆင်လာအောင်၊ ဖျက်သိမ်းလာအောင် စေ့ဆော် တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး၊ ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးသမားများ ခြွင်းချက်မရှိ ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရရေး ကိစ္စရပ်တွေမှာလဲ မင်ဒဲလားနဲ့ အခြားအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တွေဟာ စိတ်ရှည်ရှည်၊ သွေးအေးအေးနဲ့ ပညာသားပါပါ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခဲ့ကြရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနဲ့ ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးသမားများ ခြွင်းချက်မရှိ ပြည်တော်ပြန် ခွင့်ရရေး ဆိုတာ အတိုက်အခံတွေဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပထမ ဦးစားပေးအရေးကြီး ကိစ္စဖြစ်သလို၊ အစိုးရဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ပထမဦးစားပေး အရေးကြီး ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်များ၊ ဘ၀များကို လောင်းကြေးထပ်ပြီး၊ ပဋိပက္ခတွေမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုက်အခံတွေဘက်မှာလဲ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးကို ဒူးထောက်အညံ့ခံရေးလို့ တွေ့မြင်ယူဆကြသူတွေ ရှိနိုင်သလို၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှာလဲ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးကို လက်မခံလိုတဲ့ ခေါင်းမာသူများ (Hard-liners) တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ခေါင်းမာသူတွေက ရန်သူသဖွယ် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးရေး၊ ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးသမားများအား ခြွင်းချက်မရှိ ပြည်တော်ပြန်ဝင်လာရေး စတာတွေကို အမုန်းတရား ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လက်စားချေသံသရာကို ကြောက်ရွံ့၍ဖြစ်စေ၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး သမားများ အားလုံး ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်လည် တက်ရောက်သွားမှာကို ကြောက်ရွံ့၍ဖြစ်စေ အသည်းအသန် ကန့်ကွက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေး လုပ်ဆောင်လိုသူများ (Soft-liners) တွေကို အာဏာရဲ့ ပြင်ပကို ရောက်ရှိ သွားအောင် လုပ်ယူတတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတိုက်အခံတွေနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်လို သူများဟာ မိမိတို့ အစိုးရအဖွဲ့တွင်းမှာတင် ညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ အတွင်းစည်း တိုက်ပွဲတွေ လုပ်ရလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာကြီးတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေကို မင်ဒဲလားနဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များကလဲ သဘောပေါက် နားလည်ပေး ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိကျသေချာတဲ့ နိုင်ငံရေးသတင်းစကားတခုကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ပေးအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ "နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးနဲ့ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားများ ခြွင်းချက်မရှိ ပြည်တော်ပြန်ဝင်ခွင့်ရှိရေး စတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာ မဟုတ်သေးဘူး" ဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော နိုင်ငံရေးသတင်းစကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုသို့ ဦးတည်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ စတင်နေချိန်မှာပဲ အဖြစ်အပျက်တွေက မြန်ဆန်လွန်း တာကြောင့် အပြန်အလှန် မယုံကြည်မှုတွေ၊ မသေချာ မရေရာမှုတွေနဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုတွေက အတက်အကျဖြစ်လာကြပါတယ်။ မူလက နိုင်ငံရေးအရ ဝေဖန်မှုတွေ၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို လူဖြူတွေနဲ့ လူမည်းတွေအကြား ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာက အသွင်ပြောင်းပြီး၊ ဘက်တဘက်ထဲမှာ ပါဝင်နေကြသူတွေ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ဝေဖန်မှုတွေ ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ အခြေအနေတွေက ရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့် နားလည်မှုတွေ လွဲလာကြပါတယ်။ ဂိုဏ်းဂဏ ကွဲပြားမှုတွေ ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကာလရဲ့ ထုံးစံနဲ့အညီ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ထူပြောလာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခြေအနေကို ထိန်းကျောင်းဖို့အတွက် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ လူထုလူတန်းစားအလွှာအသီးသီးက လူမှုရေးရေချိန် မြင့်မားသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပေါင်းစည်းပြီး National Peace Accord (NPA) ကို တည်ထောင်လာကြပါတယ်။ NPA မှာ နိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုဆိုင်ရာ ကော်မတီတွေ အဆင့်ဆင့် ပါဝင်ပြီး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
တဘက်မှာလဲ အေအင်စီနဲ့ အန်ပီ (National Party- de Klerk အစိုးရကို ကိုယ်စားပြုသော ပါတီ) ခေါင်းဆောင်တွေက သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်တဲ့ Pretoria Minute ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ တောင်အာဖရိကမှာ ကာလရှည်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို အေအင်စီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အန်ပီခေါင်းဆောင်တွေပဲ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရုံနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးက နားလည်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအတွက် လူဖြူ၊ လူမည်း အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ပါတီအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်တဲ့ ပါတီစုံစေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖိုရမ် (multi-party negotiation forum) တခု ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ထပ်ဆင့်ကြိုးပမ်းပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ (၁၉၉၁)ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင် အများအပြား ပါဝင်တဲ့ Convention foraDemocratic South Africa (CODESA) ကို စတင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီညီလာခံကြီးကို ကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးဆွဲပြင်ဆင်ပြဌာန်းရန်၊ ညင်သာသော ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် တိုင်းပြည်၏ ပထမဦးဆုံးသော လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ Convention foraDemocratic South Africa (CODESA) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေကလဲ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ တဘက်နဲ့တဘက် အနိုင်တိုက်ရေး လမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ အခြေအနေတခုကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့အခါ ဒီလို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ ပေါ်ထွက်လာတတ်လေ့ရှိတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပညာရှင်တွေက စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ပြောပြရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို မဟုတ်ပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားသူများကို ပြောဆိုမှုတွေ ရှိလာခဲ့ရင် နာကျည်းမှုတွေ၊ မခံချင်စိတ်တွေကနေ အစွန်းရောက် အတွေးအခေါ်တွေ ပေါ်ထွက်သွားစေ တတ်ပါတယ်။
လူဖြူတွေဘက်မှာဆိုရင် de Klerk ဟာ ကိုယ့်ဘက်က လူဖြူတွေကို ချနင်းနေတယ်၊ ရောင်းစားနေတယ်လို့ စွပ်စွဲမှုတွေ ရှိလာခဲ့သလို၊ လူမည်းတွေဘက်မှာလဲ မင်ဒဲလားခေါင်းဆောင်တဲ့ အေအင်စီရဲ့ သဘောထားတွေ၊ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံတွေကို အယုံအကြည်မရှိလို့ အဆိုတင်သွင်းမှုတွေ၊ ရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူဖြူတွေနဲ့ ပေါင်းသွားပြီလို့ စွပ်စွဲမှုတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ အေအင်စီ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အန်ပီခေါင်းဆောင်တွေက စွပ်စွဲမှုပြုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပါတီတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေ၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ညီလာခံ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်လာအောင် စည်းရုံးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အချို့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ခေါင်းဆောင်များကလဲ ညီလာခံကို သပိတ်မှောက်ပြီး၊ အေအင်စီပါတီနဲ့ အန်ပီပါတီတို့ကို ညီလာခံပြင်ပ တိုက်ပွဲ လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်လာအောင် စည်းရုံးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို ညီလာခံပြင်ပတိုက်ပွဲတွေအတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိနေဆဲမှာပဲ ညီလာခံတွင်းတိုက်ပွဲတွေ ကလဲ တစတစ ပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး (negotiation) ဆိုတာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး (collaboration)နဲ့ မတူညီပါဘူး။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဆိုတာ တဘက်နဲ့ တဘက် အမြင်မတူညီမှုတွေကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ရလဒ်တခု ပေါ်ထွက်လာအောင် ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပြီး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုတာကကျတော့ မတူညီမှုတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး တူညီတဲ့အလုပ်တွေကို ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။
စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ကြရာမှာ issues တွေ အများအပြား ပါဝင်လာပါတယ်။ အချို့ issue တွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ချဉ်းကပ်နည်းလမ်း နဲ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပေမယ့် အချို့ issue တွေကို အပြန်အလှန်တွန်းအား (leverage) တွေ အသုံးပြုပြီး အကောင်အထည်ဖော်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုတာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အဆင့် တခုသာ ဖြစ်ပြီး၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဆုံးသတ်ရလာဒ်ကို ဆောင်ကျဉ်းပေး နိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စေ့စပ် ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မယ် ဆိုရင်တော့ မတူညီမှုကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ရလာဒ်တခု ပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိကမှာ ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ဟာ မတူညီမှုတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး တူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲ အကောင်အထည်ဖော်ကြတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဆင့်မှာပဲ ရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မတူညီမှုတွေကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ရလာဒ်တခုပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Convention foraDemocratic South Africa (CODESA) ကို ကျင်းပနေဆဲမှာပဲ အပြန်အလှန် Leverage တွေ အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။
အတွေးအမြင်၊ အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာ မတူညီမှုတွေ အများအပြားရှိတဲ့အနက် အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စရပ်ကတော့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေဆဲကာလမှာ ဘယ်သူတွေက အုပ်ချုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဖြူအစိုးရက စေ့စပ်ဆွေးနွေးနေဆဲကာလမှာ သူတို့ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်မယ်လို့ အဆိုတင်သွင်းပါတယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရ အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုယန္တရားက ရုတ်ခြည်း ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ အလားအလာရှိမယ်ထင်တဲ့ အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို တလက်ကနေ နောက်တလက် လွှဲပြောင်းနေဆဲမှာတင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ် ကွယ်ပျောက်သွားပြီး၊ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သူတို့က အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။
တဘက်မှာကလဲ အေအင်စီနဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေက ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ယုံကြည်မှု မရှိပါဘူး။ အစိုးရအနေနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဘက်တဘက် နေရာသာမက ဒိုင်လူကြီးနေရာမှာ ရယူထားတဲ့ အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့် ဘက်မလိုက်ပဲ စစ်မှန်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ရလာဒ်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ ခဲယဉ်းတယ်လို့ သူတို့က ယူဆပါတယ်။ တောင်အာဖရိက အသံလွှင့်ဌာနဟာ အစိုးရ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ယန္တရားဖြစ်နေခြင်း၊ စစ်တပ်မှ ကြားနေမဟုတ်ခြင်း၊ အစိုးရဘက်မှာ စစ်တပ်နဲ့ လုံခြုံရေးတပ်များ ရှိနေခြင်း၊ မီဒီယာလွပ်လပ်ခွင့်မရှိခြင်း စတာတွေဟာ အစိုးရဘက်ကို အသာစီးမှ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ပါဝါများ ပေးအပ်ထားတယ်လို့ အတိုက်အခံများက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်မှာ တဘက်က အသာစီးအနေအထားရှိနေခဲ့ရင် တရားမျှတတဲ့ ရလာဒ်ပေါ်ထွက်လာမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် အစိုးရရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို အတိုက်အခံတွေက လက်မခံကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ကို ရေးဆွဲဖို့အတွက် ပါလီမန်အသစ်တခု ပေါ်ထွက်လာဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များက သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသစ် ရေးဆွဲအတည်ပြုရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး procedural deadlock တခု ထပ်ပြီး ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ပါလီမန်အသစ်ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ရေးဆွဲတဲ့အခါ ပါလီမန်ရဲ့ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းက လက်ခံမှသာ မူကြမ်းပါ အချက်အလက်တွေကို အတည်ပြုပြဌာန်းဖို့ အစိုးရဘက်က အဆိုတင်သွင်းပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေဘက်ကလဲ ဒါကို နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဆိုတာ သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အသစ် ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရေးမှာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အေအင်စီနဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကလဲ အဆိုတခုကို ထပ်မံတင်သွင်းပါတယ်။ အကယ်၍ မူကြမ်းအတည်ပြုရေးမှာ consensus မကျလာခဲ့ရင် popular vote နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဘက်ကလဲ ဒါကို နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဆိုတာ တွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် လူထုထောက်ခံမှု ရထားတဲ့ အတိုက်အခံတွေအနေနဲ့ ပါလီမန်မှာ deadlock ဖြစ်သွားတာနဲ့ popular vote ကို သုံးပြီး အနိုင်ယူနိုင်ခွင့် ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတဘက်နဲ့တဘက်ရဲ့ နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တွေကို တွေ့မြင်ကြတာကြောင့် တဘက်နဲ့တဘက် အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အစိုးရဘက်က အတိုက်အခံတွေဟာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ အလွန်ခက်ခဲပြီး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ၄င်းတို့အလိုကျ ဖြစ်ချင်နေကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ အတိုက်အခံ တွေဘက်ကလဲ အစိုးရဟာ သဘောထား မှန်ကန်မှုမရှိပဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် ပေါ်ထွက် လာခြင်း မရှိအောင် ပိတ်ဆို့နေကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက် ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကနဦးချရမယ့် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မတူတာတွေကို ဘေးဖယ်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ မတူတာတွေကို အဖြေမထွက်မချင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကနေ ရလာဒ်တခု ထွက်လာဖို့အတွက် အပြန်အလှန် Coercive Leverage တွေ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
အေအင်စီရဲ့ Coercive Leverage ကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့အ၀ှမ်းမှာ သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အစိုးရရဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု အပေါ်မှာ စစ်မှန်တဲ့ သဘောထားရှိမရှိ၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ထောင်လိုခြင်း ရှိမရှိဆိုတာကို အများပြည်သူရှေ့မှာ သိသာထင်ရှားစေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ အတိတ်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု ဖြိုခွဲရေးနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုပြန်ပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အစိုးရဟာ ပြောင်းလဲမှု လိုလားခြင်း မရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်သူလူထုအကြားမှာ သက်သေပြပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို Coercive Leverage ကို အသုံးပြုပြီး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေဟာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးစားပွဲပေါ်က အစိုးရရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို အားပျော့လာအောင် ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစိုးရဘက်ကလဲ အေအင်စီအပေါ် အသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့် coercive leverage နည်းလမ်းသစ်ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အေအင်စီကနေ ခွဲထွက်ပြီး Inkatha Freedom Party (IFP) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အေအင်စီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Mangosuthu Buthelezi ဟာ မင်ဒဲလားမလွတ်မြောက်လာမီခင်ကတည်းက အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ မင်ဒဲလားလွတ်မြောက်လာပြီး၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍက မှေးမှိန်သွားတယ်လို့ ခံစားရပြီး၊ မင်ဒဲလားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်မှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ မင်ဒဲလားက Buthelezi နဲ့ ညှိနှိုင်းရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့်၊ Buthelezi ကတော့ သူ့ပါတီကိုပါ ညီလာခံကနေ နှုတ်ထွက်သွားစေပြီး၊ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်နေခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့တွင်းမှာရှိတဲ့ ခေါင်းမာသူတွေက ဒီလိုအခြေအနေတွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး coercive leverage အနေနဲ့ အသုံးချဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ အေအင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ IFP အဖွဲ့ဝင်တွေကို အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်စေပြီး “black-on-black violence” ရှိနေတာကြောင့်၊ လူဖြူတွေအနေနဲ့ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ဖို့ လိုသေးကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက် IFP ရဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးညီလာခံ ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အားပေးကူညီ ခဲ့ကြပါတယ်။ “Inkathagate” ဆိုတဲ့ scandal မှာ IFP ကို လက်နက်ပစ္စည်း၊ ဘဏ္ဍာငွေကြေး ထောက်ပံ့ပြီး၊ အေအင်စီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တွင်းက ခေါင်းမာဂိုဏ်း လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်ထွက်သွားတာကြောင့် အစိုးရဘက်က တာဝန်ရှိသူ အကြီးအကဲအချို့ နှုတ်ထွက် သွားခဲ့ရပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့တွင်းက လူဖြူခေါင်းမာဂိုဏ်းသားတွေက "လူမည်း နိုင်ငံရေးသမား တွေဟာ အချင်းချင်းကွဲနေတယ်၊ အချင်းချင်းလဲ တိုက်ခိုက်နေတယ်၊ ဒီလို လူတွေလက်ထဲကိုသာ အာဏာရောက်သွားရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်" ဆိုတဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိမှုတွေကို ပြည်သူလူထု အကြားမှာ ဖြန့်ချိမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထင်သာမြင်သာဖြစ်စေမယ့် အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးလာ ကြပါတယ်။ အေအင်စီဘက်ကရော၊ အစိုးရဘက်ကပါ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားစေခိုင်းခြင်းမရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အစွန်းရောက် သမားတွေက Third Force အနေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီ Third Force မှာ နှစ်ဘက်စလုံးရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ ပါဝင်နေကြပြီး အများပြည်သူကို သတ်ဖြတ်မှု၊ ခြိမ်းချောက်မှု၊ အန္တရာယ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်ကို လူအများက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထောက်ခံမှု မလုပ်ရဲတဲ့ အခြေအနေကို ဖန်တီးမှုတွေ၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို ထောက်ခံသူများနဲ့ မထောက်ခံသူများအကြား အငြင်းပွားတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ခြိမ်းချောက်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ လူအများက မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိခဲ့ရာက political violence မရှိချိန်တွေမှာလဲ အခြား violence တွေ ရှိနိုင်တာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင် ကူးပြောင်းရေးဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကို လူထုက လက်ခံလာအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေကြောင့် တောင်အာဖရိက လူဖြူ၊ လူမည်း နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ လူအများ သေကြေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ (၁၉၉၂) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့မှာတော့ Boipatong massacre ကြီး ဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ သမိုင်းဝင် တောင်အာဖရိက လူထုအရေးတော်ပုံကြီးတခုဖြစ်တဲ့ Soweto uprising နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို အေအင်စီက ဦးစီးပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အတိတ်ကို ပြည်ဖုံးကားချခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအတွက် အပြန်အလှန် ခွင့်လွှတ်နားလည်မှုယူပြီး၊ အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုး ရရှိရေးအတွက် မတူညီသောသဘောထားအမြင်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တောင်အာဖရိက နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ပါတီ (အေအင်စီ) က စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို အကောင်အထည် ဖော်နေဆဲမှာပဲ အတိတ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူထုအရေးတော်ပုံများရဲ့ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားများကိုလဲ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီလိုအခမ်းအနားကျင်းပမှုအပေါ်မှာ အစိုးရဘက်က ခေါင်းမာသူအချို့နဲ့ IFP တို့က အခွင့်ကောင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ Boipatong မှာရှိတဲ့ IFP တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေက နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပနေတဲ့ အေအင်စီအဖွဲ့ဝင်များကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်များအပါအ၀င် အေအင်စီအဖွဲ့ဝင် (၃၉) ဦး သေဆုံးသွားပါတယ်။ Boipatong massacre ဖြစ်ပွားပြီးချိန်မှာ ဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့ IFP ကို အစိုးရက လက်နက်နဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတယ်လို့ သတင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာပြန်တာကြောင့် အေအင်စီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ IFP အဖွဲ့ဝင်များအကြားမှာ တင်းမာမှုတွေက ပိုပြီး ပြင်းထန်လာပါတယ်။
မင်ဒဲလားက အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ ဒီ Boipatong massacreကို လက်ပိုက်ကြည့် မနေခဲ့ပါဘူး။ Convention foraDemocratic South Africa (CODESA) ထဲကနေ အေအင်စီကို ချက်ချင်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး၊ သူ့ပြည်သူတွေကို လုံခြုံရေးပေးဖို့နဲ့ အစိုးရကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တဲ့ ဒီအကြမ်းဖက်ကို စုံစမ်း အရေးယူပေးဖို့ နိုင်ငံ တကာကို တောင်းဆိုပါတော့တယ်။ မင်ဒဲလားရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက မစ်ရှင် ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယူအင်မစ်ရှင်ဟာ နိုင်ငံတွင်းမှာ National Peace Accord က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Goldstone Commission လို့ လူသိများသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်နဲ့ အတူ တွဲဖက်ပြီး၊ အများပြည်သူကို အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ နှောင့်ယှက်မှုတွေကို စုံစမ်းပါတယ်။ အစိုးရအာဏာပိုင်ရဲ့ ဘက်တော်သားတွေ ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ကော်မရှင်အစီရင်ခံ ထုတ်ပြန်ခဲ့ တာကြောင့် အစိုးရရဲ့ အာဏာအလွဲ သုံးစား လုပ်မှုတွေကို လျှော့ချနိုင်လာပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ (၁၉၉၂) ခုနှစ်ရဲ့ လပေါင်းများစွာမှာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ဟာ ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲ အပြန်အလှန် Leverage အသုံးပြုမှုတွေသာရှိပြီး ရပ်တန့်နေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကို နှစ်ဘက်စလုံးက ပြန်မရောက်သွားအောင် နိုင်ငံတကာက ၀င်ပြီး ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ Philadelphia မှာ မင်ဒဲလားနဲ့ de Klerk တို့နှစ်ယောက်ကို ပူးတွဲ Liberty Medal ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ Nobel Peace Prize ကိုလဲ ပူးတွဲချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးစားပွဲပေါ်မှာ နှစ်ဘက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ အေအင်စီ ကိုယ်စားပြု စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးအကြီးအကဲ Cyril Ramaphosa နဲ့ အန်ပီ ကိုယ်စားပြု စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး အကြီးအကဲ Roelf Meyer တို့ကလဲ တရားဝင်စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲ ရပ်ဆိုင်းနေပေမယ့် informal discussion ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် အတူတကွ ငါးမျှားထွက်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို နိုင်ငံတကာက ကြားဝင်ပေးမှုနဲ့ ခေါင်းဆောင်များအချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု ရှိလာအောင် တည်ဆောက်မှုတွေက တဆင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးစားပွဲပေါ်ကို ပြန်ရောက်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်များ ငါးမျှားအတူထွက်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ မင်ဒဲလားနဲ့ de Klerk တို့ဟာ Record of Understanding ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး၊ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကို ပြုလုပ် လာကြပါတော့တယ်။
ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြရာမှာ အစိုးရအဖွဲ့သစ်ကို ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီး ရွေးချယ်ရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ကို အစိုးရအဖွဲ့သစ်က တာဝန်ခံရေးဆွဲရေး ကိစ္စတွေကို သဘောတူညီမှု ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရာမှာလဲ အုပ်ချုပ်နေဆဲအစိုးရက ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုတွေ လျော့နည်းဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီ ချက်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက် အုပ်ချုပ်နေဆဲအစိုးရက သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို အလျှော့ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ မင်ဒဲလားတို့ဘက်ကလဲ ကြားဖြတ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေဆဲကာလမှာ အမျိုးသားညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ အသွင်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့ရင် အစိုးရ၀န်ကြီးနေရာအချို့ကို အခြားပါတီများမှ ပါဝင်ခွင့် ပေး၍ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းရေး စတာတွေကို သဘောတူညီပေးခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက သူတို့ရပ်တည်နေတဲ့ ရပ်တည်ချက်ကနေ အလျှော့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပမာဆိုရရင် မြစ်ကမ်းတဘက် တချက်မှာ မျဉ်းပြိုင်လျှောက်နေကြရာက လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ရပ်တံ့ပြီး ပေါင်းကူးတံတားခင်းဖို့အတွက် နှစ်ဘက်စလုံးက ကြိုးပမ်းကြတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ အစိုးရနဲ့ အေအင်စီတို့ နှစ်ဘက်စလုံးက အပေးအယူတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ De Klerk က ပါတီများနဲ့ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုပေးပြီး၊ ဆန္ဒပြသူများနဲ့ စုရုံးလာသော လူထုများကို အစိုးရက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ မင်ဒဲလားတို့ဘက်ကလဲ အဓိကရုဏ်းတွေ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ ဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ ဒေသတွေမှာ ဆန္ဒပြခြင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက တောင်အာဖရိကရဲ့ common identity ကို ထောက်ခံပြီး ဆန္ဒပြခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ မင်ဒဲလားဟာ De Klerk အစိုးရရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ credibility. ရှိလာစေရေးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို တဘက်နဲ့ တဘက် ကူညီပံ့ပိုးပြီး ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနေဆဲမှာပဲ၊ ညစာစားပွဲများ၊ ပါတီများကိုလဲ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ပညာရှင်များက ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပပေးပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်က ခေါင်းဆောင်များကို တွေ့ဆုံစေခြင်းဖြင့် လူသားချင်း ခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊ အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ အတူတကွ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးက စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု တွေဟာ တိုးတက်မှုတစုံတရာ ရှိလာစေတယ်ဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုထားခဲ့ကြပြီး၊ နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး အပြန်အလှန်ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ အနေထားကို ပြန်မရောက်သွားအောင် အလေးအနက် သတိထား ခဲ့ကြပါတယ်။
စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ကြိမ်ဖန်များစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေလို့ အကျိုးမရှိနိုင်တာကြောင့် ထိပ်တိုက်ပြန်လည် ရင်ဆိုင်မယ်လို့ တွေးခဲ့သူတွေ အများအပြားပါပဲ။ တခါတရံမှာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်က ထင်သာမြင်သာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ မဖြစ်ပဲ နှောင့်နှေးကြန့် လာနေသလိုတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီအချိန်တွေပဲ နှစ်ဘက်စလုံးက ခေါင်းဆောင်များကို နှစ်ဘက်စလုံးက အားမလို၊ အားမရတွေဖြစ်ပြီး၊ စားပွဲဝိုင်းပြင်ပ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆီ ပြန်လည်ဆွဲခေါ်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ လူချင်းတွေ့ဆုံမှုတွေ၊ သတင်းစကားပါးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်အောင်မြင်စေနိုင်ရေးကိုသာ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိနေဆဲမှာပဲ နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ ပေါ်ထွက်နေကြဆဲပါပဲ။ နှစ်ဘက်စလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်သူတွေက စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုကို လက်မခံပဲ ပျက်ပြားအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆန့်ကျင်လာကြပါတယ်။ (၁၉၉၂) ခုနှစ် အဆုံးပိုင်းကာလတွေမှာ လူမည်းစစ်သွေးကြွတွေ က လူဖြူတွေကို စစ်ကြေငြာတိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်လာကြပါတယ်။ (၁၉၉၃) ခုနှစ်ထဲမှာတော့ လူဖြူအစွန်းရောက်တွေက စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေတဲ့ နေရာကို ၀င်ရောက်စီးနင်းပြီး၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေး နေသူတွေကို ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် လူအများအပြား ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။
(၁၉၉၃) ခုနှစ်၊ အေပြီလ (၁၀) ရက်နေ့မှာတော့ အေအင်စီခေါင်းဆောင် Chris Hani ကို လူဖြူအစွန်းရောက် တဦးက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမည်းတွေက မကျေနပ်တာကြောင့် Southern Cape ကို စုဝေးချီတက်ပြီး၊ စက်ရုံနှစ်ရုံကို မီးရှို့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကနေ တဘက်နဲ့တဘက် တင်းမာမှုတွေ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ၊ လူမည်း community leaders တွေ စုဝေးပြီး၊ ယာယီငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ တရပ်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာကြောင့် လေးပတ်ခန့်အတွင်းမှာတင် အဲဒီနယ်မှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပြန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။
မင်ဒဲလားကလဲ တတိုင်းပြည်လုံးက လူမည်းတွေကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ နေကြဖို့ မိန့်ခွန်းမြွက်ကြား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ မရပ်တန့်သွားသေးပါဘူး။ (၁၉၉၃) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနဲ့ သြဂုတ်လတွေမှာ နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၀၀၀) ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၄) ခုနှစ်မှာတော့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးအရ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း တသောင်းသုံးထောင်ကျော် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုတင်းမာမှုတွေ၊ ခြိမ်းချောက်မှုတွေ၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေအကြားမှာပဲ နှစ်ဘက်စလုံးက ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဘုံအကျိုးစီးပွားရရှိရေးအတွက် မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာ ကျင့်သုံးဖို့အတွက် Interim Constitution တရပ်ကို ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ကြပြီး၊ ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကိုလဲ ချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်တွေအရ ပြည်သူလူထုက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Constituent Assembly ဟာ ကြားဖြတ်ပါလီမန်အဖြစ် တာဝန်ယူပြီး၊ နိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် အဓိကကျတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ကို ရေးဆွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရေးဆွဲရာမှာ Constitutional Court က ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Executive power မှာတော့ electoral strength ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများပါဝင်သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေးညွန့်ပေါင်း အစိုးရက အာဏာကျင့်သုံးပြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ သမ္မတကိုတော့ ပြည်သူလူထုက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Constituent Assembly က ရွေးချယ်ခန့်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးမူဝါဒအရလဲ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့အတူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပူးတွဲဆောင်ရွက်တဲ့ mixed economic system ကို အသုံးပြုဖို့ သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ မြို့နယ်တွေအလိုက် အစိုးရ အသုံးစရိတ်များ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊ လူဖြူများရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအား အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရေး စတာတွေကိုလဲ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးဟာ တဘက်နဲ့တဘက်ရဲ့ အခြေခံအကျိုးစီးပွားတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို အပြန်အလှန် အသိအမှတ် ပြုလာကြပါတယ်။
ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေ ရှိနေဆဲမှာပဲ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို တလျှောက်လုံး ဆန့်ကျင်လာခဲ့တဲ့ Buthelezi ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ကိုလဲ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လဲ High-level delegations တွေဖြစ်တဲ့ U.S. envoy Henry Kissinger နဲ့ British envoy Lord Carrington တို့က ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချိန်အထိတောင် ထူးခြားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Kenyan envoy Washington Okumu က ဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပကတိအခြေအနေမှန်ကို သိမြင်ဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါဝင်ခဲ့ရင် နိုင်ငံရေးအရ ဘေးရောက်မှုပဲ အဖြေထွက် လာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟာ မအောင်မြင်သော လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖြစ် နိဂုံးချုပ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေး ပြောကြားခဲ့တဲ့အခါမှသာ Buthelezi ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ရှစ်ရက် အလိုကျမှသာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်အတွင်းကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်နေ့အထိ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ ပေါ်ထွက်နေဆဲပါပဲ။ သို့ပေမယ့်လဲ (၁၉၉၄) ခုနှစ်၊ အေပြီလ (၂၇) ရက်နေ့မှာတော့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းသစ်ကို ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မေလ (၂) ရက်နေ့မှာ de Klerk က သူ့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအရှုံးကို အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ မင်ဒဲလားကို ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း သတင်းစကား ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ မင်ဒဲလားကလဲ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ တောင်အာဖရိက တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ဘယ်လိုကွဲပြားမှုတွေ ရှိနေပေမယ့် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို အတူတကွ ၀ိုင်းဝန်းထူထောင်ကြဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို ခေါင်းဆောင်တွေအကြား၊ နှစ်ဘက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအကြား ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင် မှုဟာ on the ground မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိလာဖို့အတွက် မပြီးပြည့်စုံသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပဋိပက္ခပြီးဆုံးပြီး နှောင်းပိုင်းကာလမှာ ပဋိပက္ခကာလတွေတုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ trauma တွေကို ကုစားဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ မင်ဒဲလားဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ ဘုန်းတော်ကြီး Desmond Tutu ဦးဆောင်တဲ့ Truth and Reconciliation Commission (TRC) ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကော်မရှင်ကနေ ပဋိပက္ခမှာ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မည်သူမဆို ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြန်လည်ပြောပြရေး၊ နားထောင်ပေးရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ မည်သူမဆို (လူဖြူအစိုးရဘက်မှဖြစ်စေ၊ လူမည်းတော်လှန်ရေးသမားများဘက်မှဖြစ်စေ) ပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရှိရေး စတာတွေကို ထောက်ကူပေးတဲ့ forum တွေကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ ရင်ကြားစေ့ရေး (၀ါ) ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဖြစ်စဉ် (Reconciliation process) အတွက် ကော်မရှင်က ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် တောင်အာဖရိက စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ် အောင်မြင်ခဲ့ရတာဟာ တဘက်နှင့်တဘက် အနိုင်မတိုက်နိုင်သော ပကတိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှန်ကို နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များက သိမြင်မှု၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စဉ်ကြီး စတင်လာစေရန် ခြေလှမ်းသစ်များ လှမ်းရဲမှု၊ ပါတီစုံစေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖိုရမ် (multi-party negotiation forum) တခု ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်များ တည်ထောင်နိုင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ စည်းမျဉ်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးဆွဲပြင်ဆင်ပြဌာန်းရန်၊ ညင်သာသော ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် တိုင်းပြည်၏ ပထမဦးဆုံးသော လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရန်စသော ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မှီလာစေရန် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဖော်ဆောင်မှု၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်နေသူများနှင့် ထောက်ခံသူများအား နိုင်ငံရေး အစွန်းရောက်များမှ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ခြိမ်းချောက်မှုများ၊ သတ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်လာသော်လည်း မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲဖြင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ် အောင်မြင်ရေးကို အာရုံစိုက်မှု၊ လိုလားချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များကို တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း မရှိပဲ အပေးအယူ၊ အလျှော့အတင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ သဘောထားကြီးမှု၊ ခွင့်လွှတ်မှုများဖြင့် ရင်ကြားစေ့ရေး (၀ါ) ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဖြစ်စဉ်ကို ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော်မှု စတာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ လေ့လာချက်များမှာ တောင်အာဖရိက စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသော ကမ္ဘာ့ပြည်သူများအတွက် စံနမူနာယူစရာ ဖြစ်စဉ်တခုအဖြစ် သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၆၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁)
Deegan, H. (1999) South Africa Reborn: BuildingaNew Democracy, Padstow: University College London
Bouckaert, P. (1997) The Negotiated Revolution: South Africa's Transition toaMultiracial Democracy, Stanford, California: Stanford Center on Conflict and Negotiation
Du Toit, P. (1995) State Building and Democracy in Southern Africa: Botswana, Zimbabwe, and South Africa, Washington, DC: United States Institute of Peace
Ebrahim, H. (1998) The Soul ofaNation: Constitution-Making in South Africa, Cape Town: Oxford University Press
Gastrow, P. (1994) Bargaining for Peace: South Africa and the National Peace Accord, Washington, DC: United States Institute of Peace Press
Lyman, P. (2002) Partner to History: The U.S. Role in South Africa's Transition to Democracy, Washington, DC: United States Institute of Peace Press
Mandela, N (2006) Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela, London: Little, Brown
Marks, S. (2000) Watching the Wind: Conflict Resolution during South Africa’s Transition to Democracy, Washington, DC: United States Institute of Peace
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ စတင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ ဂရုတစိုက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ၊ ကုထုံးတွေကို စနစ်တကျ ခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေမှာလဲ ရောဂါဝေဒနာတွေ ဖြစ်ပွားလာတတ်တာကြောင့်၊ ကနဦးလက္ခဏာများ စတင် ပေါ်ထွက်လာစဉ် ကတည်းက သတိပြုမိပြီး၊ လိုအပ်သော ကုသမှုတွေ၊ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဝေဒနာဆိုးတွေကနေ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ရဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒတွေမှာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် internal objectives (စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးရေး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်း လျော့နည်းရေးစသည်များ) ပါဝင်သလို၊ external objectives (နိုင်ငံ၏ ငွေပေးငွေယူရှင်းတမ်း- balance of payments equilibrium ဖြစ်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား အားပေးဆောင်ရွက်ရေး၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ အလွန်အကျွံ အတက်အကျများမှုအား ကာကွယ်ရေး စသည်များ) လဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလို internal objectives နဲ့ external objectives တွေ အောင်မြင်ရေးအတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်း (exchange rate) က အရေးကြီးပါတယ်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်းလျော့နည်းခြင်း (depreciation of exchange rate) ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပြည်တွင်းသွင်းကုန် တန်ဖိုးတွေ မြင့်မားလာပြီး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု (inflation) ဖြစ်လာပါတယ်။ စီးပွားရေးမှာ ပြည်ပပို့ကုန်ကဏ္ဍ အားကောင်းလာပြီး၊ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှု လျော့နည်းလာပါတယ်။ ဒီလို ပြည်ပပို့ကုန်ကဏ္ဍ အားကောင်း လာချိန်မှာ ပို့ကုန်တွေက သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ (ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မျက်ရတနာ စသည်များ) ကို အခြေပြုထားခဲ့ရင်၊ ပြည်တွင်းကို နိုင်ငံခြားငွေ အများအပြား စီးဝင်လာပါတယ်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံခြားမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှု (Overseas Development Aid) တွေကနေ တဆင့် နိုင်ငံခြားငွေတွေ အများအပြား စီးဝင်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ပြည်တွင်းမှာ exchange rate volatility ဖြစ်လာပါတယ်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်း အဆမတန် မြင့်မားမှု (appreciation of exchange rate) ဖြစ်လာရာကနေ၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ စက်မှုကဏ္ဍများမှ ပြည်ပပို့ကုန်များရဲ့ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအား ကျဆင်းလာပြီး၊ ပြည်ပပို့ကုန်ကဏ္ဍကို ထိခိုက်လာစေ နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များအား ပြည်ပသို့ ပို့ဆောင်မှု၊ ပြည်ပနိုင်ငံများအား ရောင်းချမှု စတာတွေကနေ နိုင်ငံခြားငွေ အများအပြား ၀င်ရောက်နေပြီး၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တိုးတက်မြင့်မားလာခြင်းတွေလဲ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်၊ တနည်းဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာ သုံးစွဲတဲ့ ငွေက ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မာလာပြီဆိုရင်၊ Dutch Disease ရဲ့ ကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြသနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Dutch Disease ဆိုရာဝယ်
မြောက်ပင်လယ် (North Sea) မှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်း၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အဆောက်အုံကို သက်ရောက်မှုတွေအကြောင်း လေ့လာဆန်းစစ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို (၁၉၇၇) ခုနှစ်မှာ The Economist က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ အမည်က “The Dutch Disease” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရာကနေ နိုင်ငံခြားငွေ အများအပြား နိုင်ငံတွင်းသို့ စီးဝင်လာခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ အရင်းအမြစ်များ Booming sector သို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားခြင်း စသည်များကြောင့် ဈေးနှုန်းနဲ့ ငွေလဲလှယ်နှုန်း ပြောင်းလဲသွားပုံတွေ၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားလာတဲ့အတွက် အခြားပို့ကုန်ကဏ္ဍမှာ ဈေးကွက်ရှယ်ယာလျော့နည်းလာပြီး၊ ပို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကို ထိခိုက်ပုံတွေကို မီးမောင်းထိုးပြထားခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၅၉) ခုနှစ်က နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး natural resource sector အခြေပြုတဲ့ ပို့ကုန်ဝင်ငွေ တိုးမြင့်လာပါတယ်။ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာ ကျဆင်းလာပြီး၊ (၁၉၇၀) ခုနှစ်တွေမှာ စက်မှုကဏ္ဍထဲမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတွေ (၁၆) ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်း သွားပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းက (၁.၁) ရာခိုင်နှုန်းကနေ (၅.၁) ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်သွားပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေရဲ့ share of profits ဟာ (၁၉၆၀) ကာလတွေမှာ (၁၆.၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိရာကနေ (၁၉၇၀) ကာလတွေမှာ (၃.၅) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထိုးကျသွားပါတယ်။
(၁၉၇၀) ကာလတွေမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလဲ အလားတူ စီးပွားရေးအခြေအနေတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ရေနံဈေးနှုန်းတွေ လေးဆလောက်တက်နေချိန်မှာ စကော့တလန်ကမ်းခြေအနီးမှာ ရေနံရှာဖွေလာနိုင်တဲ့အတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာ ရေနံတင်ပို့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလို natural resource sector ကို အလေးပေး ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ စတာလင်ပေါင် ငွေလဲနှုန်း မြင့်တက်လာပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဗြိတိန် အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ခတိုးမြင့်တောင်းဆိုမှုတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး၊ အခြားပို့ကုန်တွေကလဲ uncompetitive ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဗြိတိန်မှာ recession ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ Dutch Disease ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Angola, Nigeria, Sudan , Venezuela, Sierra Leone, Liberia နဲ့ Congo အပါအ၀င် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ် ပို့ကုန်ကနေ ရရှိလာတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေကြောင့် ငွေလဲနှုန်းတိုးတက်လာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ Dutch Disease ကို ခံစားနေကြရပါတယ်။
Dutch Disease ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ် အမျိုးအစား တမျိုးဖြစ်တဲ့ ရေနံရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို ဥပမာပေး တင်ပြလိုပါတယ်။ ရေနံက ရရှိတဲ့ တိုင်းပြည် ၀င်ငွေတွေကလဲ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကို လွှမ်းမိုးမှု ရှိလာတဲ့အခါ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာပြီး၊ လူနေမှုစရိတ်စကတွေ တက်လာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ တခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေ ဖြစ်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လျော့နည်းလာပြီး၊ စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှု (economic competition) ကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ အစိုးရဟာ ရေနံက ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ခံစားရလာတာနဲ့အမျှ လာဘ်စားမှုတွေနဲ့ ဖြုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်လာပြီး၊ တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနဲ့ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ရေနံက ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ပြန်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မလုပ်ပဲ၊ ကိုယ်ပိုင် အကျိုးစီးပွား အတွက် နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေမှာ အပ်နှံတာ၊ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေ ဖြစ်လာပြီး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှာ ပြန်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း မရှိတဲ့အခါ အခြေအနေတွေက ဆိုးသထက်ပိုပြီး ဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။
Dutch Disease ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို လေ့လာကြတဲ့အခါ ဘောဂဗေဒပညာရှင် Corden နဲ့ Neary တို့ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ core model ကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီ model အရ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍများကို သဘာဝအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ (natural resource sector)၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့် စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ စသော သဘာဝအရင်းအမြစ် မဟုတ်သည့် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ (non-resource tradables sector) နှင့် ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေးတွင် အသုံးမပြုသော ကုန်စည်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သော ကုန်သွယ်ရေးမဟုတ်သည့်ကဏ္ဍ (non-tradables sector) ဆိုပြီး ကဏ္ဍသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
ဒီကဏ္ဍသုံးမျိုးအနက် natural resource sector နဲ့ non-resource tradables sector တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဆန်စပါး၊ စက်မှုထွက်ကုန် စသည်များရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်က သတ်မှတ်ပြီး၊ non-tradables sector က ကုန်စည်များနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ ကိုတော့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်က သတ်မှတ်ပါတယ်။ non- tradables တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ tradables တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကို အချိုးချပြီး real exchange rate ကို တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ non- tradables တွေမှာ ၀ယ်လိုအား မြင့်တက်လာတဲ့အခါ ငွေလဲလှယ်နှုန်းတိုးတက်မှု (appreciation of real exchange rate) ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွေ တိုးတက်လာတဲ့အခါ ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀င်ငွေ တိုးတက်မြင့်မားလာပြီး၊ ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေပါ တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တိုးတက်မှုက ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး၊ ၀င်ငွေမြင့်မားမှု၊ consumption မြင့်မားမှုတွေကြောင့် တိုင်းသူပြည်သူများရဲ့ လူနေမှုဘ၀ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ငွေလဲလှယ်နှုန်းတိုးတက်မှုက သဘာဝအရင်းအမြစ် သယံဇာတပစ္စည်းများအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောင်းချခြင်း အပေါ်မှာ တည်မှီပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဆိုရင်တော့ အခြားစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ၊ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍများရဲ့ ပြည်ပပို့ကုန် တင်ပို့မှုကို ထိခိုက်နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွေကို နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့သော ကဏ္ဍများ (lagging sector) လို့ သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
Corden နဲ့ Neary တို့ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ core model ကနေ Dutch Disease ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်ပုံ နှစ်မျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ natural resource sector က စန်းပွင့်လာတဲ့အခါ တခြားကဏ္ဍတွေမှာရှိတဲ့ capital နဲ့ labour တွေက ဒီလိုစန်းပွင့်သော ကဏ္ဍ (booming sector) ထဲကို ရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံထဲက တခြားကဏ္ဍတွေမှာ ထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းလာပါတယ်။ non-tradables sector မှာ ဒီလို လျော့နည်းလာတဲ့အခါ ပို့ကုန် မဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဥပမာ- မြေဈေး၊ အိမ်ဈေးတွေလဲ အတိုင်းအဆမရှိ ခုန်တက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြည်တွင်းဈေးကွက်က ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့အညီ tradables sector ရဲ့ နှုန်းတွေက လိုက်ပြီး မမြင့်တက်နိုင်ပါဘူး။ tradables sector က ကုန်ပစ္စည်းတွေကကျတော့ အထက်မှာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်က သတ်မှတ်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တိုးတက်မှု (appreciation of real exchange rate) ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ဘောဂဗေဒ ပညာရှင်တွေက ဒါကို အရင်းအမြစ်ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု (resource-movement effect) လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
နောက်ထပ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတခုကတော့ သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု (spending effect) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ natural resource sector စန်းပွင့်လာတဲ့အခါ ၀ယ်လိုအားတွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ non-tradables ကဏ္ဍမှာ ၀ယ်လိုအား မြင့်တက်လာတဲ့ အခါမှာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို မူတည်တဲ့ non-tradables တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းက မြင့်တက်လာပါတယ်။ non-resource tradables တွေကတော့ ပြည်ပဈေးကွက်ကို မူတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းကို မြှင့်ချင်တိုင်းမြှင့်လို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအခါမှာ ငွေလဲနှုန်းက တိုးတက်လာ ပါတော့တယ်။
ဒီလို ငွေလဲနှုန်း တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍကို အခြေပြုတဲ့ ပြည်ပပို့ကုန် လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်လာပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေဆီကနေ ပြည်တွင်းကို ပြန်ပို့တဲ့ ငွေအပေါ်မှာ မှီခိုနေရတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ ရပ်တည်ရေးကိုလဲ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ တနည်းဆိုရင် လူလတ်တန်းစားတွေကို အများဆုံးထိခိုက်စေပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူလတ်တန်းစား (middle class) ရာခိုင်နှုန်း များလာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူလတ်တန်းစားရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းလာပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ အခြေခံလူတန်းစား ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားလာခြင်း၊ ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစားတွေဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူများနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များဆီမှာသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဓနဥစ္စာများကို ရယူသုံးစွဲခံစားပိုင်ခွင့် များပြားနေခြင်း စတာတွေဟာ စီးပွားရေးပြဿနာ၊ လူမှုရေးပြဿနာနဲ့ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
Dutch Disease အား ကုစားခြင်း
Dutch Disease ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကုစားနိုင်တဲ့ ဆေးမြီးတို နည်းလမ်းတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါအန္တရာယ် ပိုပြီး မဆိုးရွားစေရန် ကာကွယ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် macroeconomic polices (fiscal policy, monetary policy, structural policies) တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
(၁) Fiscal Policy
ဒတ်ခ်ျရောဂါရဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို လျော့နည်းစေဖို့အတွက် fiscal policy ကို main instrument တခု အနေနဲ့ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ spending effect ရဲ့ သက်ရောက်မှုက ပိုပြီးဆိုးရွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသုံးစရိတ်များ ထိရောက်ချောမွေ့စေခြင်း (smoothing of spending) ဖြင့် volatility ကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများ (ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သစ်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ စသည်များ) ကနေ ရရှိတဲ့ ၀င်ငွေတွေကို စုဆောင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ပြုလုပ်ဖို့အတွက် natural resource fund တခု ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ volatility လျှော့ချခြင်း၊ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး fund အမျိုးအစား (saving fund, stabilization fund, investment fund) စတာတွေကတော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
၀င်ငွေတွေရဲ့ မည်၍မည်မျှသော ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရအသုံးစရိတ်အတွက်အသုံးပြုပြီး၊ မည်၍မည်မျှသော ရာခိုင်နှုန်းကို natural resource fund မှာ ထည့်သွင်းထားရှိရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ fiscal rules တွေ ချမှတ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဘောဂဗေဒ ပညာရှင်များက အကြံပြုထားကြပါတယ်။ အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး medium-term expenditure framework ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက် စီးပွားရေးပညာရှင်များနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများက ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြမယ် ဆိုရင် ပိုပြီးအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ သုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (transparency) ကို အားကောင်းစေရုံသာမက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု (corruption)များနဲ့ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို အာဏာအသုံးပြု၍ အလွဲသုံးစားပြုမှုများ ကိုလဲ တိုက်ဖျက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒတ်ခ်ျရောဂါကို ကုစားဖို့အတွက် fiscal policy ကို အသုံးပြုရာမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ သတ်မှတ်ချက်နည်းလမ်း (permanent income approach) ကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအရ သဘာဝသယံဇာတ ပစ္စည်းတွေကနေ ရရှိလာမယ့် natural resource revenues ကို ကနဦးတွက်ချက်ပြီး၊ အစိုးရအသုံးစရိတ်အတွက် သင့်လျော်တဲ့ ပမာဏတခု ချမှတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ကျန်ဝင်ငွေများကို တိုင်းပြည်ဥစ္စာဓန (sovereign wealth) အဖြစ် ပြည်ပမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အကယ်၍ တချိန်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းတွေ လျော့နည်းပျောက်ကွယ်လာတဲ့အခါ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဥစ္စာဓနတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘောဂဗေဒပညာရှင် Collier ဦးဆောင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ ကတော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် ပိုပြီးအသုံးဝင်နိုင်တဲ့ “optimal” fiscal rule နည်းလမ်းကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအရ သဘာဝသယံဇာတကနေ ရရှိလာတဲ့ resource revenues တွေကို ကနဦးအစမှာ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာ စုဆောင်းရင်းနှီးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အများအပြား ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက် လျော်ကန်ပေမယ့် စီးပွားရေးအဆောက်အအုံမှာ ပြန်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာ မဟုတ်ပဲ စစ်အသုံးစရိတ်များကြီးမားလာမှုနဲ့ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများကို မည်သို့မည်ပုံ ကာကွယ်နိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုပါ တွဲစပ်အသုံးချနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တင်းကြပ်တဲ့ fiscal discipline မရှိပဲ ဒီနည်းလမ်းကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။
(၂) Monetary Policy
Monetary policy ဆိုရာမှာ supply of money ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အတိုးနှုန်းများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း စတာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ပညာရှင်များရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံခြားငွေ အမြောက်အမြား စီးဝင်လာတဲ့အခါ nominal exchange rate ကို တရားသေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ monetary policy ကို ကျင့်သုံးနေရင် ဒတ်ခ်ျရောဂါရဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနိုင်ပါတယ်။ Taylor interest rate rule နဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့ nominal exchange rate flexibilityပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ monetary policy ကို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ဒတ်ခ်ျရောဂါရဲ့ ဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အတိုးနှုန်းများကို ထိန်းချုပ်မှုဆိုရာမှာလဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းများရဲ့ တည်ငြိမ်မှု (stability) နဲ့ ထိရောက်အားကောင်းမှု (efficiency) တို့ကို သုံးသပ်ပြီး စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ bank failure မဖြစ်သွားဖို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းတခုမှာ failure ဖြစ်တာနဲ့ အများပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လှုပ်ခါသွားစေနိုင်ပြီး၊ တခြားဘဏ်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာပါ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ဟာ အစိုးရရဲ့ လက်အောက်မှာ မရှိပဲ independent central bank ဖြစ်လာခဲ့ရင် monetary policy ရေးရာတွေကို ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၃) Structural Policies
ဒတ်ခ်ျရောဂါကို ကုစားနိုင်မယ့် နောက်ထပ်မူဝါဒတခုကတော့ trade liberalization ပြုလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် non-tradables sector မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ demand pressure ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မူဝါဒတခုကတော့ အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေကို လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊ ကုန်စီးဆင်းမှုချောမွေ့စေသော infrastructure များ ဖွံ့ဖြိုးလာရေး၊ ပညာရေးနှင့် အရည်အချင်းတိုးမြှင့်ရေး စတာတွေမှာ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအသုံးစရိတ်တွေကို များများစားစား အသုံးပြုစရာ မလိုတဲ့ အခြားမူဝါဒတွေကိုလဲ ချမှတ်ဆောင်ရွက် နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်လိုအပ်ချက်များ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ကြိုးနီစနစ်ကျင့်သုံးမှုများအား လျှော့ချခြင်း၊ monopolistic
barriers များ လျော့နည်းစေခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (Foreign Direct Investment) များကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်လဲ spillover effects တွေကနေ တဆင့် conditions for learning by doing ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြလာတဲ့အခါ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို ရယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလဲ ပျက်စီးယိုယွင်းစေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြလာတဲ့အခါ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို ရယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆေးပညာရှင်ဆိုရာမှာလဲ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ အလုံးစုံကျွမ်းကျင်နေသူတွေဆိုတာ မရှိတာကြောင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်၊ နားနှာခေါင်းလည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန် စသဖြင့် အထူးကုဆရာဝန်များစွာနဲ့ ယူနစ်များစွာ ဆေးရုံတွေမှာ ထားရှိကြရပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ စီးပွားရေးပညာရှင် ဆိုရာမှာလဲ ကဏ္ဍတိုင်းမှာ အလုံးစုံကျွမ်းကျင်နေသူတွေ မရှိနိုင်ပါဘူး။ Development Economics, Financial Economics, Labour Economics, Health Economics, Environmental Economics, Economic Growth အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ တိုင်းပြည်တွေမှာ Government Economic Services, Institute of Public Policy စတာတွေ တည်ထောင်ထားရှိခြင်း၊ တက္ကသိုလ်ဌာနများရဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဖိုရမ်များ ကျင်းပခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ချို့တဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒတ်ခ်ျရောဂါကို ကုစားနိုင်ရေး၊ ပိုမိုဆိုးရွားမသွားစေရန် ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် Macroeconomic policies ကဏ္ဍကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သော ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ပညာရှင်များ ( ဥပမာ- ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီတက္ကသိုလ်များ၊ အပြည်ပြည်ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ စသည်တို့မှ သုတေသီများ) ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အကြံဥာဏ်များကို ရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၆၊ ၈၊ ၂၀၁၁)
(စာရေးသူသည် ယူကေနိုင်ငံ၊ Aberdeen တက္ကသိုလ်၊ ဘုရင့်ကောလိပ်မှ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ အထူးပြု ဘောဂဗေဒ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါသည်)
Brahmbhatt, M., O. Canuto and E. Vostroknutova (2010). Dealing with Dutch disease, Economic Premise 16, World Bank, Washington, D.C.
Collier, P., F. van der Ploeg, M. Spence and A.J. Venables (2010). Managing resource revenues in developing economies, IMF Staff Papers, 57, 1, 84-118
Corden, W.M. and J.P. Neary (1982). Booming sector and de-industrialisation inasmall open economy, Economic Journal, 92, 825-848.
Corden, W.M. (1984). Booming sector and Dutch Disease economics: Survey and consolidation, Oxford Economic Papers, 36, 359-380.
Giavazzi, F., J. R. Sheen, and C. Wyplosz. (1988). “The Real Exchange Rate and the Fiscal Aspects ofaNatural Resource Discovery.” Oxford Economic Papers 40 (3): 427–50.
Ismail, K. (2010). “The Structural Manifestation of the ‘Dutch Disease’: The Case of Oil Exporting Countries.” Working Paper 10/103. International Monetary Fund, Washington, DC.
Morshed, A.K.M. and S.J. Turnovsky (2004). Sectoral adjustment costs and real exchange rate dynamics inatwo-sector dependent economy, Journal of International Economics, 62, 147-177.
Torvik, R. (2001). Learning by doing and the Dutch Disease, European Economic Review, 45, 285-306.
Williamson, J. 2008. “Exchange Rate Economics.” Working Paper 2. Commission on Growth and Development, Washington, DC.